Kismaayo oo markii koowaad yeelanaysa duq magaalo oo lasoo doortey - Hablaha Media Network
Kismaayo oo markii koowaad yeelanaysa duq magaalo oo lasoo doortey
HMN:- Markii ugu horeysey muddo fog magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu wadaa in ay yeelato duq magaalo oo lasoo doortey, kaasi oo ay jiraan gole deegaan oo la xisaabtami doona.
naqshadda cusub ee Kismaayo
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii magaalada Kismaayo laga daah durey barnaamijka dhismaha dowladaha hoose ah oo ah mashruuc Qaramada Midoobey taageereyso, balse la doonayo in nidaamka dowliga ah hoos loogu sii dhaadhiciyo.
Barnaamijkan waxaa iska kaashanaya dowladda federaalka wasaaradeeda arrimaha gudaha iyo tan Jubbaland, waxaana la doonayaa in 40 xildhibaan oo kuwa golaga deegaanka lasoo xulo, kuwaasi oo soo dooran doona duqa magaalada.
Hadda duqa magaalada waxaa ah mudane Ibraahim Timo Jilic oo digreeto lagu soo magacaabay, mana jiraan gole deegaan oo la xisaabtama iyo wax miisaaniyad ah oo uu ku shaqeeyo intuba.
Marka golaha deegaanka la dhiso , duqana la doorto ayaa waxaa lagu qasbanaan doonaa in miisaaniyad loo sameeyo magaalada, waxaana looga fadhiyaa in maamulka dowladda hoose uu qabto dhammaan adeegyadii asaasiga ahaa sida nadaafadda, canshuur uruurinta, dhul bixinta, iyo waxyaabaha la midka ah.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa furitaanka shirka daah furka ka sheegey in nidaamka dowliga hoosta loo daadajinayo uu yahay mid bulshada anfici doona si la mid ah sida maamul goboleedyada u anfaceen.